၇။ ဝိုင်ဘူးပုလင်းအပင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့သြဖွယ်ရာအချက်အလက်များ - ၂၀၂၀
နေအိမ် / သတင်း / ၇ ဝိုင်ဘူးဘူး၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အံ့သြဖွယ်ရာအချက်အလက်များ (ဝိုင်ဘူးဘူးသေတ္တာသုံးသပ်ချက် ၂၀၂၀)
Can Opener မှ ၂၁ ရာစုဝိုင်ပုလင်းဖြူထုတ်လုပ်သူများအထိ
Today you won't surprise anyone with ဝိုင်ပုလင်းဖြူထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ. But, unfortunately, the overwhelming majority of beer lovers associateacan with something low-quality, cheap and wrong, so to speak. This stems from transnational corporations. These were among the first to use this type of packaging. But what exactly prompted them to turn to this beer container?
ထိုအချိန်တွင်ဘီယာနှင့်ဆိုင်သောအဓိကပြproblemနာမှာ "သတ္တုအရသာ" ကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အကြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ဝိုင်ပုလင်းဖြူထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ. They claim that the taste of beer fromacan is “not the same”.
ဒုတိယပြproblemနာမှာဘီယာ၏ဖိအားကြောင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာဘီယာ "ကာဗွန်" ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ယခင်ကစည်သွပ်ဘူးထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများသည်ထိုကဲ့သို့သောပြproblemsနာများနှင့်မရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
By the early 1930s, ဝိုင်ပုလင်းဖြူထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ had developedacan strong enough to withstand the pressure ofapoured beer. They also finally solved the can lining problem by usingaresilient plastic called Vinylite.
Prev: Best Ideas for Decorative Candle Tins Bulk
နောက်တစ်ခု - ၃ လူကြိုက်အများဆုံးဝိုင်ဗူးပုလင်းများကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်းလက်ကားရောင်းမည်